“Counselor တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ၊ ဗဟုသုတ နဲ့ လေ့လာမှုတွေဟာ ကိုယ့်အတွက် သာမက ကိုယ့်ဆီလာတဲ့ မိဘနဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက်ပါ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်” – Crown Education
American College Test (ACT)နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနဲ့ အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေက ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေ မေးလေ့ မေးထရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေက ACTဆိုတာဘာလဲ ? ACT Test ဖြေဆိုမှုအပိုင်းမှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်လဲ ? ဘယ်သူ တွေ အဓိကထားပြင်ဆင်သင့်လဲ? ACT Test ဖြေဆိုဖို့အတွက် Registration ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ဘယ်မှာဖြေဆိုရမလဲ? စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အရင်ဆုံး ACT Testအကြောင်းလေးတွေ မျှဝေပေး လိုပါတယ် … ACT ...
Jan 18, 2019 Admin News
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားတဲ့လူငယ်တွေ iGCSEပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ HND (IT) တက်ရောက်ပြီးစီးထားတဲ့ ကျောင်းသား လူငယ်တွေအနေနဲ့ ယူကေနိုင်ငံမှာ ပညာသင်ကြားခြင်းထက် အချိန်တိုအတွင်း ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစွာ လေ့လာနိုင်တဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံပညာရေးကို ရွေးချယ်မှု များပြားလာကြပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ITဘာသာရပ်ကို လေ့လာသင်ကြားနိုင်တဲ့ကျောင်းတွေ (တနည်းအားဖြင့် Institute) အများအပြားရှိလို့နေပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက် စင်္ကာပူ+သြစတြေးလျ နှစ်နိုင်ငံ စာသင်အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝရစေမယ့် James Cook Universityနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက် ပါရစေ … ယနေ့ခေတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသီးသီးမှာ IT ...
Jan 05, 2019 Phone Letyar Blog, News
Date : Jan 13, 2019 (Sunday): 9:00 a.m to 1:00 p.m : NOVOTEL HOTEL WHAT IS DIGITAL EDUCATION? Digital Education ဆိုသည်မှာ ပညာရပ်တစ်ခုခုကို စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာလိုသူများ၊ ကျောင်းသူကျောင်း သားများ အတွက်၊ ခေတ်မှီသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများသုံးကာ E-Learning System များဖြင့်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာများလေ့လာ သင်ယူခြင်း ၊ လေ့ကျင်သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Royal Academic Institute အနေဖြင့် Digital Education ...